Markets Archives - Page 2 of 78 - The Source
Sustained losses weaken ZSE Top 10 index
HARARE, January 18 (The Source) – Losses in Econet and Padenga dragged the Zimbabwe Stock Exchange Top 10 index down by 1,86 percent to close at 91,11 points on Thursday.
1 month ago by adminCurrencies
HARARE, January 17 (The Source) – The Zimbabwe Stock Exchange All Shares index dropped 0,64 percent on Wednesday to 93,24 points on losses by Econet and some mid-cap stocks.
1 month ago by Equities
Losses in big caps drags Zimbabwe stocks lower
HARARE, January 10 (The Source) – The Zimbabwe Stock Exchange All Shares Index dropped 0,64 points on Wednesday to close at 96,94 points on losses recorded by heavyweight counters, Econet, Innscor and Hippo.
ZSE opens week lower
HARARE, January 8 (The Source) – The Zimbabwe Stock Exchange All Shares Index opened the week lower, easing 0,19 percent to settle at 97,4 points.
ZSE outlook and 2017 Top performers
HARARE, January 8 (The Source) – After a record 2017, analysts say stocks to watch this year will be in tourism, construction, retail and agriculture.
Simbisa and OK Zimbabwe drag Zim stocks lower
HARARE, January 4 (The Source) – The Zimbabwe Stock Exchange industrial index eased 0,74 percent to settle at 324,98 points on Thursday weighed down by losses in Simbisa and OK Zimbabwe while the mining index remained flat at 142,4 points.